SOLAR SOLVE LTD FANAZAVANA TANJONA
HOE IZA ISIKA - Ity politika momba ny tsiambaratelo ity dia natao ho an'ny Solar Solve Ltd (SSL) ary mifehy ny tsiambaratelon'izay olona misafidy ny hampiasa ireo fotodrafitrasa na serivisy atolotry ny orinasa. Solar Solve Ltd (SSL), dia fikambanana misy mpanjifa sy mpanontany erak'izao tontolo izao. Mila mifandray amin'izy ireo isika mba hahafahantsika manatanteraka ny fangatahan'izy ireo. Noho izany dia mandray antsipirian'ny fifandraisana izahay izay mampiditra ny anaran'ny olona, ​​ny anaram-piasana, ny nomeraon-telefaona (arakaraka izay nomen'izy ireo anay), adiresy mailaka ary adiresy paositra.
Izahay dia mitandrina tsara mba hahazoana antoka fa ny mombamomba ny olona iray manokana, izay tena manan-danja indrindra aminay ary manan-danja eo am-pitantanana ny orinasantsika, dia marina, voatahiry tsara ary mijanona ho tsiambaratelo. Ny mombamomba ny fifandraisana manokana amin'ny endrika kopia sarotra dia voatahiry ao amin'ny faritra azo antoka ao amin'ny toerana misy antsika, miaraka amin'ny fitehirizana elektronika voaaro amin'ny teny miafina. Ny fidirana amin'ireo karazana fitehirizana roa dia voafetra ho an'ireo mpiasan'ny SSL izay mila manana izany ihany.
TYPES OF DATA MIVOAKA - Ary koa ny angon-drakitra mahazatra (ny mombamomba anao manokana momba ny fifandraisana misy ny anarana, adiresy mailaka, adiresy e-mail sy nomeraon-telefaona), rehefa misy olona mangataka asa fanompoana omenareo, na inona na inona ifandraisany aminay amin'io serivisy io ; izay rehetra miditra ao www.solasolv.com Ny tranonkala dia hanome antsika fampahalalana fanampiny amin'ny manaraka:
WEBSITE COOKIES - ny solasolv.com tranonkala dia noforonina tamin'ny fampiasana fitaovana WordPress ary toy ny ankamaroan'ny tranonkala dia mampiasa cookies izy hanangonana vaovao. Cookies dia rakitra data kely izay apetraka amin'ny solosaina na fitaovana hafa rehefa mizaha ity tranonkala ity ianao mba hahatsiarovanao zavatra toy ny rehefa mitsidika ny tranokalanay ny solosainao.
ANALYTIC TOOLS - Rehefa misy olona mitsidika www.solasolv.com Mampiasa tolotra fanamafisam-pahalalahana fahatelo izahay hanangonana ny fampahalalam-baovao anaty aterineto sy ny antsipirian'ny fitondran-tenan'ny vahiny. Manao izany izahay mba hahitana zavatra toy ny isan'ny mpitsidika amin'ireo faritra samihafa ao amin'ilay tranokala. Ity fampahalalana ity dia natao fotsiny amin'ny fomba izay tsy mamantatra olona. Tsy manao izany isika, ary tsy mamela ny mpanome tolotra antsika hanao, na inona na inona tadiavina hahafantarana ny mombamomba ireo izay mitsidika ny tranokalantsika.
ANARAN'ANDRIAMANITRA TANJONA ANTSIKA - Ireo mpanome tolotra hafa dia mampiasa ny angon-drakitra mifandraika amin'ny tarehimarika mpitsidika sy ny toerana nipetrahan'izy ireo, toerana misy azy ireo ary ny Internet Service Provider izay efa hitany solasolv.com tranonkala. Noraketinay ihany koa ny isan'ny mpitsidika misafidy ny hampiasa ny tranokalanay sy ny antontan'isa hafa mifandraika amin'ny serivisy.
PARTIES THIRD - Ny mombamomba ny fifandraisana manokana dia tsy hozaraina amin'ireo fikambanan'ny antoko fahatelo hanodinana azy ireo raha tsy tena ilaina izany ary fantatry ny olona manontany tena fa ilaina ny hetsika toy izany, mba hahomby amin'ny fanompoana ny fanadihadiana na hanodinana baiko.
FAHATSIAROVANA AO ANATIN'NY ANKIZY AZO ANTOKA - SSL dia manolotra serivisy fandefasana eran'izao tontolo izao. Ny mombamomba ny fifandraisan'ny tena manokana, raha ilaina mba hahafahan'ny baiko na fangatahana fanatanterahana vaovao dia hafindra manerantany.
NY ZAVA-DRAHARAHANA NY FAHALALANAO ARA-TOEKARIKO NY TANJONA - Solar Solve Ltd (SSL), dia fikambanana misy mpanjifa sy mpanontany erak'izao tontolo izao. Mila mifandray amin'izy ireo isika mba hahafahantsika manodina ny baikony na ny fangatahany hafa. Noho izany dia mandray antsipirian'ny fifandraisana izahay izay mampiditra ny anaran'ny olona, ​​ny anaram-piasana, ny nomeraon-telefaona (arakaraka izay nomen'izy ireo anay), adiresy mailaka ary adiresy paositra.
Mampiasa izany fanazavana amin'ny fomba maro izany izahay: hamaly ny fangatahana fanolorana na karazana fampahalalana hafa; mba hiaina toy ny ampahany amin'ny fifanarahana fanodinana SSL-famerenana; ho an'ny tanjona hitrandrahana, mba hanamarinana ny firaketana an-tsoratra dia tsara ary hijery ny fotoana rehetra ary avy eo dia faly sy afa-po ianao.
SSL dia te hijanona hifandray amin'ny mpanjifany / mpanjifa mety ho antony ara-drariny ara-drariny. Ny fomba iray anaovanay izany dia amin'ny famoahana ny dika mitovy amin'ny gazetinay vaovao sy ny Greetings isan-taona, mandritra ny volana desambra isan-taona.
Izahay dia tsy mivarotra, manofa na mivarotra lisitry ny mailaka amin'ireo fikambanana hafa na orinasa hafa.
MOMBA NY TANJON'NY TIME SSL dia TSY MANAIKY ANKAPOBENY ANY AN-DANITRA - Hodinihinay ny mombamomba anao raha mbola ilaina ny fanatanterahana ny 'tanjon'ny fikirakirana ny mombamomba anao manokana' araka ny voalaza tao amin'ny fizarana teo aloha ary mifanaraka amin'ny lalàna azo ampiharina. Na mandra-pahatsiarovanao anay fa tsy tianao intsony ny handefasanay ny mombamomba anao manokana.
NY ZAVA-DAHATSORATRA NY FIFANEKENAOOO AO AMIN'NY FITIAVANA - Zonao ny, (i) ampahafantarina anao momba ny angon-drakitra manokana izay anodinanan'ny SSL momba anao; (ii) ahodino ny datao manokana ary / na voafafa raha tsy marina izany ary (iii) manohitra ny fanodinana ny angon-drakitrao manokana ary esorina izany.
Azonao atao ny mandefa mailaka info@solasolv.com miaraka amin'ny loha-loha-hevitra FANONTANIANA AN'ANDRIAMANITRA DINGANA MITOVY, na mandefa taratasy any amin'ny Personal Data Processor, Solar Solve Ltd., 7 Waldridge Way, Simonside East Industrial Park, SOUTH SHIELDS, NE34 9PZ, UK.
Izay tsy afa-po amin'ny valinteny avy amin'ny Personal Data Processor SSL dia afaka mandefa mailaka info@solasolv.com miaraka amin'ny loha-loha fakatahin'ny FIANARANTSON'I JOHN LIGHTFOOT DPO na taratasy ho an'i John H Lightfoot MBE, mpiandraikitra ny fiarovana ny tany, Solar Solve Ltd., 7 Waldridge Way, Simonside East Industrial Park, SOUTH SHIELDS, NE34 9PZ, UK.
FITORIANA NY FITSIPIKA ARA-PANAHY
Raha tsy faly ianao amin'ny fomba fanodinan'ny SSL ny antsipirian'ny fifandraisanao manokana na ny fomba nitondran'ny mpiasa SSL ny fangatahanao dia azonao atao ny mametraka fitoriana amin'ny manampahefana mpanara-maso. Azonao atao izany amin'ny fotoana rehetra. Mifandraisa azafady amin'ny maso ivoho maso / maso manara-maso.
FIZARANA AN'ANDRIAMANITRA - Ity politika momba ny tsiambaratelo an'ny Solar Solve Ltd ity dia nodinihina, nohavaozina be ary naverina navoaka tamin'ny 31 Jolay 2018. Hodinihina isan-taona izy io ao anatin'ny politika fitantanana kalitaon'ny SSL.